FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SIBERIA AUSSIE - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika siberia Aussie
Alika mpiompy aostralianina / siberian Husky mifangaro
Keegan the Australian Shepherd / Siberian Husky mix (Aussie Siberian) amin'ny 8 taona
Ny Alussie Aussie tsy alika tsy madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpiandry Aostraliana ary ny Husky Siberia . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Tiberius the Husky / Australian Shepherd mifangaro amin'ny 2 taona— 'Tiberius dia nalaina avy amin'ny fialofana eo an-toerana izay nitolo-batana imbetsaka noho ny maha-artista fitsoahana azy. Nanana azy 9 volana izahay ary faly izy. Tany am-boalohany dia nampiseho fanahiana sy fisalasalana kely izy fa rehefa nandeha ny fotoana dia lasa nahazo aina be izy, milalao, mamy, be fitiavana, tsy mivadika ary mahery fo. Hafahafa be izy amin'ny filalaovana alika hafa , manao zavatra toa tsy mahalala ny fomba filalaovana izy nefa mbola hiaraka amin'ny alika izay mitovy be aminy amin'ny habeny sy ny karazany. Indraindray isika dia manana olana amin'ny famahanana azy satria tiany ny misy karazana sakafo hafa miharo aminy sakafo maina (mpihinana mifantina). Tibs dia tia ny ety ivelany ary mivadika biby dia amin'ny tontolo voajanahary. Manodidina ny 55 lbs izy, mahia ary salama. Manana maso maitso iray ary maso mainty iray. Palitao volom-borona sokola misy crème sy fotsy amin'ny tratrany sy ny tongony. Miaina ny sasany isika fanahiana fisarahana saingy minoa fa avy natolotra tany amin'ny fialofana. Alika tena faly amin'ny fihetsem-po be. Mahalana no mivovo fa hidradradradra indraindray. '
Tiberius the Husky / Australian Shepherd mifangaro amin'ny 2 taona
Daisy the Aussie Siberian amin'ny faha-7 taonany (renim-pianakaviana Austrailian Shepherd sy Aussie Husky ray)
Sansa ny antsasaky ny Husky / antsasaky ny mpiandry ondry Australiana amin'ny 2 taona— 'Sansa dia alika mpamonjy izay ananantsika nolaniana . Nisy namana iray tsy afaka nikarakara azy ary izaho sy ny vadiko no nandray azy. Rehefa azonay izy dia hitanao ny tranony taolan-tehezana. Taorian'ny nandraisanay azy dia lasa alika 15,8 kg izy ary faly sy milalao indrindra raha ny momba ny zanakay. Toa Husky kokoa izy avy eo, ary Mpiandry Aostraliana. '
karazana alika mpiady totohondry
'Vincent dia mpiandry ondry aostralianina lahy mifangaro amin'i Siberian Husky. Tokony ho 6 volana eo amin'ny 53 pounds eo amin'ny sary izy, fa 80 taona kosa ny iray taona. izy mitsako ny zavatra rehetra ! (Ny fiara, ny grill BBQ, ny moto, ny kovetabe mafana, ny rehetra ankoatry ny kilalao ... izay aleony.) I mandehana azy iray kilaometatra isa-maraina sy hariva ary ento izy isaky ny dia mitoby / fitsangantsanganana izay alehako. Tiany ny ety ivelany ary mivezivezy amin'ny toerana rehetra izy nefa mifikitra akaiky. Nanafatra harness fotsiny aho mba hitondra azy bisikileta satria tiany ny misintona ahy amin'ny bisikiletiko miaraka amin'ny vozon'akanjoko. Izy dia mora zatra ary dia tena hyper . '
shetland mpiandry ondry sy poodle mifangaro
Bailey the Australian Shepherd / Siberian Husky mix— 'Tiany ny milalao any ivelany afaka mihazakazaka mandritra ny andro. Tena marani-tsaina izy ary matetika dia gaga amin'ny zavatra azony atao. '
Bailey the Australian Shepherd / Siberian Husky mifangaro amin'ny alika kely
Sky the Aussie Shepherd / Husky mix mitsambikina ny anaram-bosony dia Googlymuffin sy Puppynoodle.
Sky the Aussie Shepherd / Husky mix
Alize the Aussie / Husky mix (Aussie Siberian) - 'Alize no namana akaiky indrindra izay tsy ho hitan'ny ankamaroan'ny olona amin'ny androm-piainany. Tonga tao amiko izy tamin'izy 6 herinandro ary mbola tsy nandao ahy mihitsy. Tsy nandeha namaky ireo zavatra kely mahazatra toy ny fitsakoana alika na fihadiana mihitsy izy. Tsy mba liana tamin'io zavatra io mihitsy izy. Natahotra foana izy hoe aiza no misy ahy ary inona no ataoko. Handry am-pandriana aho ary mazava ho azy fa eo anilan'ny farafarako izy rehefa maheno azy misento be aho indraindray ary mimenomenona. 13 taona izy ary mitomany fotsiny ny fahalalako fa mijaly noho ny azy ny namako akaiky indrindra vanin-taolana na dia rehefa avy nanome fanafody azy isan-kariva sy maraina aza. Matahotra mafy aho ny hitsangana satria raha vao mifoha aho dia mifoha ihany koa, saingy maharitra vetivety izy ary tiako hiala sasatra izy. Tsy tsapako fa reraka ny namako ary mety tsy dia ela loatra intsony no nanampiako azy. Tiako be izy ary tena tia ahy izy. '
Alize ny mix Aussie / Husky (Aussie Siberian)
sarin'ny pitbull bulldog mix
Aleksandre 'Aleks' ilay Australian Shepherd / Siberian Husky mix (Aussie Siberian) toy ny alika kely— 'Aleksandre dia volom-borona volafotsy tanora Aussie / Husky misy teboka mainty sy kibo fotsy ary tratra, teboka fotsy iray ao an-damosin'ny lohany, ary tendron'ny rantsan-tongony fotsy ary tendron'ny rambony. Ny volana voalohany teo ho eo nahitana azy (9 herinandro ka hatramin'ny 14 herinandro) dia tena matotra, voatandrina ary mandinika i Aleks, saingy rehefa mahazo aina kokoa amin'ny tranony izy ary 'manangona' dia manjary adala izy. Tena mikorontana izy, ary manome ny zanany 5 taona Border Collie rahavavy (Chloe) miaraka amina asa mitaky asa be. Miraiki-po be aminy izy, ary tia miady an-tokotany, ary indraindray manandrana ao anatiny koa. Izaho dia mpandeha an-tongotra sy finiavana tsara foana araho avy hatrany ao aoriana ny ombelahin-tongontsika, na dia tsy mandeha aza. Manana telo izy saka rahalahy manana fihetsika tsy mitovy ary tena mahafatifaty amin'izy ireo, mamerina ny sofiny ary mametaka ny rambony hampandehanan'izy ireo. Ny fifangaroana miavaka indrindra amin'ny karazany dia ny fifandraisany. Aleks dia be feo sy maneho hevitra toa ny a Husky , ary hikororoka, mimenomenona, mimenomenona, misioka ary (milalao) mimenomenona. Tsy hainy ny mitoloko, na izany aza, ka ny maranitra Hodi-kazo Aussie maheno matetika. Mahira-tsaina izy, na dia mafy loha aza, ary mora zatra rehefa tiany. Tsy tokony handany herinaratra izy, ary hanao tsinontsinona ireo zavatra tsy hitany (toy ny 'mihozongozona' na fotoam-piofanana lava kokoa). Mahafinaritra ny fahitany ny masony, indrindra rehefa mampiasa azy io izy mba 'hangatahana zavatra'.
Aleksandre 'Aleks' ilay Australian Shepherd / Siberian Husky mix (Aussie Siberian) ho alika kely
Aleksandre 'Aleks' ilay Australian Shepherd / Siberian Husky mix (Aussie Siberian) amin'ny maha alika kely azy
Aleksandre 'Aleks' ny Australian Shepherd / Siberian Husky mix (Aussie Siberian) ho toy ny alika kely eo amin'ny borosy volo.
Aleksandre 'Aleks' the Australian Shepherd / Siberian Husky mix (Aussie Siberian) amin'ny 1 1/2 taona
dane tsara sy saint bernard
Aleksandre 'Aleks' ilay mixer Australian Shepherd / Siberian Husky mix (Aussie Siberian) amin'ny 1 1/2 taona— 'Ilay sofina iray ihany no efa niakatra, ny iray kosa floppy foana ary mieritreritra aho fa mikasa ny hijanona ho toy izany. Rehefa mihinana na mahazo lanja izy dia tsy miseho eo amin'ny valahany izany, fa eo akaikin'ny vodin-tratra.
Aleksandre 'Aleks' ilay mixer Australian Shepherd / Siberian Husky mix (Aussie Siberian) amin'ny 1 1/2 taona— 'Ity i Aleks milalao' Edward Kibblepaws ', lalao iray izay ahitany ahy manampy sakafo amin'ny tongony iray na roa kibble iray eo am-piandrasana, ary avy eo dia mihinana ireo tondroiko ihany.
alika kely chihuahua mainty sy mainty
sarin'i yorkie shih tzu mix
sarin'alika alika fohy mpanondro alemana
laboratoara amerikana bulldog afangaro alika kely